Mampahafantatra ny mpiasa sy ny tompon’orinasa momban’ny fiahiana ara-tsosialy ny Cnaps. Nisy ny atrikasa notanterahina niaraka tamin’ny ministeran’ny Asam-panjakana sy ny lalàna sosialy noho izany.
Nanatanteraka atrikasa hampahafantarana ny momban’ny fiahiana ara-tsosialy ho an’ireo tompon’orinasa ny ministeran’ny Asam-panjakana sy ny lalàna sosialy miaraka amin’ny CNAPS. Atrikasa izay natao tamin’ity anio ity ary nifarana androany teny Anosy. Tanjona ny hampafantatra ireo tompon’orinasa ny lalàna mifehy ny fiahiana ara-tsosialy.
« Tafiditra amin’ny fanapahan-kevitry ny Fanjakana Malagasy amin’ny ilay fanentanana ny olona rehetra voakasiky ny resaka fiahiana ara-tsosialy mandritra ny telovolana ity hetsika ity », araka ny fanazavan’ny Tomponandraikitra eo anivon’ny Cnaps, Rasoanaivo Didier.
Hiroso amin’ny fampiharana ny Ministera sy ny CNAPS aorian’ny telo volana.
Rasoanaivo Didier, Tomponandraikitra eo anivon’ny Cnaps. cc : Toria Dimbiniaina
Ankoatra izay dia misy ny fidinana ifotony ataon’ireo “Task force” eny anivon’ny orinasa manerana ny Nosy. Efa iray volana izay no nanombohan’ny fidinana ary tsy hifarana raha tsy afaka roa volana. Fidinana natao hanentana sy hampafantarana ireo mpiasa sy ny tompon’orinasa ny momban’ny fiahiana ara-tsosialy. Tanjona ny hampidirana ireo mpiasa rehetra ao anatin’ny Cnaps.
« Hisy ny fampiharana ireo zavatra nitondran’ny Task force fanentanana aorian’ny telo volana fihidinana eny ifotony », hoy Rasoanaivo Didier.
Tsara ny manamarika fa ny avy ao amin’ny ministeran’ny Asa sy ny lalàna sosialy miaraka amin’ny Cnaps no mandrafitra ity “Task force” ity.